Artificial Grass - FuJian WaJuFo Sports Technology Co., Ltd
Artificial Turf yeSoccer Pitch
Iyo Wajufo artificial turf ndiyo sarudzo yako yakakwana yechinangwa chenhandare yemitambo, tinopa nyanzvi yekugadzira turf mhinduro yenhandare yenhabvu.
Yedu yakakosha fomula yehuswa faibha inopa yekugadzira turf kunzwa kwakapfava uye kuita kwakakwana pamiyedzo yakasiyana inosanganisira bhora roll, vertical bhora rebound, kubatwa nekuvhunduka uye kukwenya kweganda.
Wajufo artificial grass inosangana nemwero wepasi rose zvakasimba, yakachengeteka uye ine hushamwari kuvamhanyi nenharaunda.
Wakaneta nekushandisa nguva yakawandisa nemari mukuchengetedza nhandare yako yenhabvu here?Huswa hweWajufo huchakununura kubva mudambudziko rekudiridza, kuchekerera, kuisa fetiraiza patsangadzi, uye kunoita kuti gomo rako rishande zvakanaka mumwaka mina.
Artificial Grass YePadel Court
WAJUFO SPORTS inopa marudzi maviri ehuswa hwepadel: fibrillate uye imwechete filament.Ose ari maviri emhando dzemazuva ano dzakagadzirirwa kuti vatambi vachengeteke, vakasununguka uye kuderedza njodzi yekukuvara.
Iwo anowanikwa mune akati wandei mavara kuti awedzere kuoneka kwebhora munzvimbo dzakasiyana: inorova bhuruu, terracotta tsvuku kana classical girini.
Vese vanosangana nemutemo wakadzikwa uye latex inotsigirwa nemakomba ekudhonza kusimudzira kubviswa kwemvura pamatare ekunze.
Ziva kuti ndeupi rudzi rweuswa hunonyatso kuzadzisa zvaunoda uye uvake yako padel court yakanaka.
Dhaunirodha bhurocha reSoccer
Munda Wakagadzirwa Kuti Uhwine Unotanga NaHi...
Iwe unoda kuongorora mhinduro mukuvaka kana kugadziridza nhandare yako yenhabvu yekugadzira pamwe chete neWajufo?Ingotanga nemhoro.
Artificial Grass yeGorofu Kuisa Green
Wajufo Gorofu Series kuisa girinhi chigadzirwa chekuvandudza chinokupa inoshamisa yekuisa girinhi yekutamba chiitiko muyako yekuseri, ine bicolor dhizaini uye yakakwira density, inopa kutaridzika kwechisikigo uye kunzwa kwakasununguka, unogona kunakidzwa nechiitiko chechokwadi chegorofu kumba.Kune vanofarira gorofu, Wajufo Sport ndiyo yemhando yepamusoro-soro inogovera yehunyanzvi kuseri kwemba inogadzirwa nekuisa girinhi, ichipa huchokwadi husingaenzaniswi maererano nemhando yepamusoro uye aesthetics.Iko kuisa yegirini yakagadzirwa nehuswa hwekugadzira inodhura zvakanyanya sezvo kugadzirisa kuri nyore, hapana chikonzero chekuchekesa, kudiridza kana kufefetera, kana uchimhanyisa gorofu, funga kuti yakawanda sei uye nguva yaungakuchengetere.Wajufo Gorofu Series inoshandiswa zvakanyanya kuseri kwemba ichiisa girinhi uye chaiyo gorofu kosi.